(08/08/2016) Xaflad Lagu Daah furay Diwaangalinta Dhacdooyinka muhiimka ah oo ka dhacay magaada Jigjiga ee DDSI. – Awdal State Economic and Political Council.
HomeWararka Soomalida(08/08/2016) Xaflad Lagu Daah furay Diwaangalinta Dhacdooyinka muhiimka ah oo ka dhacay magaada Jigjiga ee DDSI.
(08/08/2016) Xaflad Lagu Daah furay Diwaangalinta Dhacdooyinka muhiimka ah oo ka dhacay magaada Jigjiga ee DDSI.
August 8, 2016 Wararka Soomalida
xaflad balaadhan oo lagu daah-furayay bilaabitaanka diwaangalinta dhacdooyinka muhiimka ayaa ka dhacay xarunta maamulka xaafada labaad ee caasimada jigjiga.
(08/08/2016) Madaxweynaha oo wafdi ka socda Jarmalka uga warbixiyay hawlaha doorashada (Sawiro)
Xafladii Awdal State ee london 2011